संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग गरे प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकिन्छ ः उद्धवप्रसाद खरेल, मेयर बूढानीलकण्ठ नगरपालिका | NepaleKhabar.com
संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग गरे प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकिन्छ ः उद्धवप्रसाद खरेल, मेयर बूढानीलकण्ठ नगरपालिका
September 30, 2020 | 8:05 am
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै २०७४ सालमा करिब दुईदशक पछि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । नयाँ संरचनामा स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिइएका कारण टोलटोलमा सरकार पुगेपछि जनताको आकांक्षासमेत तीव्ररुपमा बढ्न पुग्यो । देश संघीयतामा गएपछि पनि तीन तहका सरकारबीच कामको बाँडफाँडमा अन्योल, कर्मचारी समायोजन तथा हाल कोरोना भाइरसका कारण स्थानीय निकायले आशा गरेअनुरुप प्रतिफल दिन सकेनन् कि भन्ने गुनासो बढिरहेको छ । बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर उद्धवप्रसाद खरेल लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा विकासप्रेमी तथा दूरदृष्टि राख्ने राजनीतिज्ञको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । यसैक्रममा नेपाल ई खबरले मेयर खरेलसँंग उहाँले चुनावमा गरेका प्रतिबद्घता कति पूरा गर्नुभयो, यो अवधिमा के कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुप¥यो र आगामी दिनमा नगरपालिकाका योजना के के छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रही गरेको कुराकानी ः
तपार्इं निर्वाचित भएको तीन वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो यो अवधिमा तपार्इंले निर्वाचनको समयमा गर्नु भएका प्रतिबद्घता के कति पूरा गर्नुभयो ?
काठमाडौंको उत्तरतर्पm रहेको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका धेरै जन संख्या भएको नगरपालिका हो । यहाँ धेरै ठाउँका मानिस आएर बसोबास गरिरहनु भएको छ । साविकका ६ वटा गाविस मिलेर बनेको यो कान्छो नगरपालिका हो । नयाँ नगरपालिका भएको र राज्य पुनःसंरचनाको क्रममा भएकाले सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता यसलाई कसरी एकीकृत रूपमा लिएर जाने भन्ने थियो र सबैको चाहना यसलाई कसरी सुखी र समृद्घ नगरपालिका बनाउने भन्ने नै थियो । यो चाहनालाई मूर्तरूप दिनका लागि हामीले पाँचवटा कुरामा जोड दिँंदै आएका थियौं र अहिले पनि हामी ती पाँचवटा कुरालाई हासिल गर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेका छौं ।
पाँचवटा कुरामध्ये पहिलो प्राथमिकता सुशासन नै हो । एक एकवटा इकाईमा काम गरिरहेका संरचनाहरू एकीकृत हुँदा केही गाह्रो हुन्छ कि भन्ने लागिरहेको थियो तर हामीले १३ वटा वडामा काम कारबाही एकीकृत गरेर जनतालाई बिनाझन्झट सेवा प्रदान गरिरहेका छौं । हाम्रो दोस्रो प्राथमिकता भनेको पूर्वाधार निर्माण हो जसलाई हामीले तीव्ररूपमा अगाडी बढाइरहेका छौं । स्थानीय निकायका भवनसमेत नभएको अवस्थामा विभिन्न इकाईका भौतिक संरचना एकीकृत गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण काम थियो । यसलाई हामीले एकीकृत गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं र अहिले भौतिक पूर्वाधार निर्माणकार्यलाई दु्रतता दिइरहेका छौं । तेस्रो प्राथमिकता सामाजिक विकास हो जसका लागि हामीले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत दलित, गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायलाई मूलप्रवाहमा जोडने काम गरिरहेका छौं । चौथो प्राथमिकता आर्थिक विकास हो जो राज्यको समेत प्राथमिकता हो । आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारण अत्यन्त चुनौतीपूर्ण काम हो । हामीले कृषि, पशुपालनलाई व्यवस्थित बनाउने तथा तालिम तथा सीप दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने, बजार तथा व्यवसायलाई व्यवस्थित गरेर आर्थिक क्रियाकलापमा जोड दिइरहेका छौं । पाँचौ प्राथमिकता वन, वातावरण, फोहर मैला तथ ा विपद् व्यवस्थापन हो जसका लागि हामीले विभिन्न क्षेत्रसंँगको सहयोग र समन्वयमा काम गरिरहेका छौं ।
विभिन्न चुनौती कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सीप, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अनुभवको कमी तथा हाल आएर कोरोना महामारीका बाबजुद् हामीले यी प्राथमिकताका आधारमा बजेट छुट्याएर कार्यान्वयनमा अगाडि बढिरहेका छौं । हामीले केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको सहयोगमा विकास निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाइरहेका छौं । विभिन्न चुनौतीका बीच हामीले सुरु गरेका परियोजना सम्पन्न हुन केही समय लागिरहेको छ तर हामी हाम्रा पाँचवटा प्राथमिकता पूरा गर्नेतर्पm अग्रसर छौं । समग्रमा हामीले आफ्नो कामको मूल्यांकन गर्दा ५० नम्बर दिने गरेका छौं र हाम्रो कार्यकाल सकिने बेलासम्म यो नम्बरलाई ६० देखि ७० मा पु¥याउने हाम्रो लक्ष्य छ ।
तपाईंको कार्यकालमा हालसम्म भएका पाँचवटा मुख्य उपलब्धि के के हुन् ?
सर्वप्रथम हामीले नगरपालिकाको आफ्नै भवन बनाउन सफल भएका छौं सम्भवत उपत्यकाका नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा पहिले भवन बनाउने हामी नै हौं । यसका साथै थुप्रै पूर्वाधार निर्माण गरेका छौं । दोस्रो हामीले नगरपालिकामा रहेका १४ वटा महत्वपूर्ण सडकको निर्माण सुरु गरेका छौं । विभिन्न कारणले निर्माण सम्पन्न हुन केही समय लागे पनि हामीले फागुनसम्म सबै सडकको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । खानेपानीमा हामीले एक घर एक धारा भन्ने लक्ष्य राखेका छौं । नगरपालिकामा रहेका करिब ३० हजार घरमध्ये १५ हजारमा धारा जडान भइसकेका छन् भने बाँकी घरमा पनि धारा पु¥याउने हाम्रो लक्ष्य छ जसका लागि हामीले विभिन्न योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । अहिले हामीले २१५ करोडको खानेपानी आयोजना निर्माणको क्रममा छौं । यो वर्ष करिब ३ हजार धारा जोड्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौं । आगामी वर्ष बाँकी धारा जडान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछौं । ३० वटा विद्यालय भवन नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार निर्माण तथा पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा छौं । अर्को हामीले पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिएका छौं । आर्थिक विकासका लागि पर्यटकीय मार्ग तथा पूर्वाधार बनाउने काम गरिरहेका छौं ।
पूर्वाधार विकासमा समय लाग्ने रहेछ विभिन्न चुनौतीका कारण हामीले सबै काम गर्न नसके पनि हामी त्यो दिशामा अगाडि बढिरहेका छौं ।
सघन बस्तीका कारण वातावरण संरुक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको अहिलेको अवस्थामा वातावरण संरक्षणका लागि यहाँहरूले के कस्ता प्रयास गरिरहनुभएको छ ?
२५७ वटा नगरपालिकाजस्तै हामीहरू पनि यो नगरपालिकालाई कसरी गजबको नगरपालिका बनाउने भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं । ३५ वर्गकिलोमिटरमा पैmलिएको प्रकृतिको काखमा रहेको यो नगरपालिकाको वातावरण संरक्षण गरेर पर्यटनको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि हामीले विभिन्न योजना बनाइरहेका छौं । हामीले वातावरण संरक्षणलाई आयआर्जनको माध्यम बनाउन सकियोस् भनेर पर्यटन विकासका लागि पदमार्ग, साइकलमार्ग तथा संग्रहालयलगायतका अन्य पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउनका लागि अगाडि बढिरहेका छौं । विभिन्न बस्तीलाई मौलिक बस्तीको रूपमा विकास गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । तर यी सबै कुरा गर्नका लागि नागरिकको सहयोग अपरिहार्य छ । हामी एकीकृत योजना बनाउने क्रममा छौं तर यसका लागि माथिल्लो निकायको सहयोग अपरिहार्य छ र ती निकायले स्थानीय तहलाई अभैm पूर्ण विश्वास गरिसकेका छैनन् । हामीले अत्यन्त गरिब तथा सहयोग आवश्यक भएका मृगौलालगायत रोगका बिरामीलाई १०÷१२ हजार रुपैंया सहयोग गर्दासमेत सो रकमलाई बेरुजु देखाउने तथा आफ्ना मान्छेलाई पैसा बाँडे भन्ने हिसाबले प्रचार गर्ने गरिन्छ यस्तो परम्परागत सोचाइमा परिवर्तन हुन जरुरी छ । हामीले निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइनुपर्दछ । हामीले सुखी र समृद्घ नगरको जग बसाल्ने काम गरिरहेका छौं ।
सरकार टोलटोलमा पुगेको छ तर अहिले पनि सेवाग्राहीले सेवालिने क्रममा ढिलासुस्ती लगायतका विभिन्न चुनौती भोगिरहेका छन् यसको समाधानका लागि केही योजना बनाउनुभएको छ ?
तपाईंले उल्लेख गर्नुभएका चुनौती मैले पनि सामना गरिसकेको छु र कर्मचारीको परम्परागत कार्यसम्पादनको बारेमा म पनि जानकार छु तर हाल म यी कुरा समाधान गर्ने स्थानमा आएको छु । अहिले जुन परम्परागत शैलीको कार्यसम्पादन छ त्यसमा परिवर्तन हुन जरुरी छ । प्रविधिको प्रयोगबाट यसलाई केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी प्रविधिको प्रयोगमा समेत जोड दिँदै आएका छौं । सरलरूपमा सम्पन्न गर्न सकिने प्रक्रियालाई समेत एकदमै जटिल बनाइएको छ । जनतालाई छिटो छरितो सेवा कसरी दिन सकिन्छ भनेर म लागिरहेको छु तर पनि चाहेअनुसार गर्न सकिएको छैन । यहाँको कु–शासनको चक्रविरुद्घ मेरो पहल जारी छ तर कहिले काँही आफै यो चक्रमा पसिन्छ कि भन्ने डर लागिरहन्छ । कसरी यो प्रक्रियालाई सहज बनाउने भनेर विभिन्न कार्यविधि बनाउने, प्रविधिको प्रयोग गर्ने र कार्यसम्पादन प्रक्रिया निर्माण गर्ने तथा जिम्मेवार व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउने कुरामा हामी लागिरहेका छौं । सेवाप्रवाहमा हिंँजो जुन प्रकारको मानसिकता थियो त्यो परिवर्तन गर्नका लागि केही समस्या भए पनि आशा गर्दछौं यो विस्तारै परिवर्तन हुनेछ ।
यहाँहरूले यो अवधिमा विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नुभयो, आगामी दिनमा समेत कोभिडको चुनौती जारी रहने देखिन्छ, यस परिस्थितिमा आगामी डेढ वर्षमा विकास निर्माणका कामलाई कसरी निरन्तरता दिनुहुन्छ ?
हो, हाम्रो कार्यकाल करिब डेढ वर्ष बाँकी छ तर यो समयमा कोभिड हामीसँंगै रहने निश्चित छ । अहिले पनि कोभिड संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । तर यो परिस्थितिमा पनि हामीसँंग अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । हामीलाई कोभिडको समयमा बाटोको टेण्डर गरेर गेट बनाउन लागे भनेर आलोचना गर्ने गरिन्छ तर कोभिडको नाममा विकास निर्माणकार्य ठप्प पार्न सकिंँदैन । कोभिड नियन्त्रण गर्ने तथा सचेतना जगाउँदै सुरु गरेका परियोजना सम्पन्न गर्ने, सुशासन तथा संरचनात्मक सुधार गर्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेका छौं । कोभिडबाट धेरै नडराइकन आवश्यक सजगता अपनाउँदै हामी आफ्नो लक्ष्यमा अगाडि बढ्ने तथा विभिन्न गतिविधिलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं । आमनागरिकलाई समेत म यसबाट धेरै चिन्तित नबनी आवश्यक सजगता अपनाउँदै आवश्यक सेवा तथा कार्य सञ्चालनका लागि अनुरोध गर्न चाहान्छु । यसका साथै कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ, महामारी नियन्त्रण तथा जनचेतनाका क्रियाकलापसमेत निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिनेछन् ।
यो अवधिमा यहाँहरूले भोग्नुभएका मुख्य चुनौती के के हुन् ?
तीन तहको सरकारको सहअस्तित्वता सहकार्यका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्दछ । केन्द्रीय सरकारले नीतिनिर्माण तथा क्षमता अभिवृद्घिमा सहयोग गर्नुपर्नेमा त्यो गर्न सकिरहेको छैन । स्थानीय तहको योजनामा केन्द्रीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्दछ तर स्थानीयस्तरमा भ्रष्टाचारमात्र भइरहेको छ भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति सुनिन्छ । केही व्यक्तिले अनियमितता गरेमा उनीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्दछ सबैलाई एकै हिसाबले हेरिनु हुँदैन । प्रदेश सरकार अलमलिएको छ उसको कामका बारेमा स्पष्टता नभएकाले कहिलेकाँही स्थानीय सरकारसँंग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको जस्तो देखिन्छ यस्तो गर्नु हुँदैन । प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय योजनामा ध्यान दिनुपर्दछ । स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोत वृद्घि गर्दै जनतालाई सुशासन कसरी दिन सकिन्छ भनेर अगाडि बढ्ने हो । माथिल्ला दुई सरकारले सहयोग गर्ने हो भने अझ प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न सकिन्छ । टोलटोलमा सरकार पुगेको छ यसका काम कारबाही कसरी प्रभावकारी गराउने भनेर बहस गरिनुपर्दछ । केही विकृति भएमा आगामी दिनमा सुधार हुनेछ र आगामी निर्वाचनपछि स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता अभैm बढ्नेछ ।
नगरको बिकासको लागि जनसहभागीता कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ ?
समुदायको सहभागितामा कसरी प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न सकिन्छ र समुदायलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले योजना बनाइरहेका छौं । अहिलेको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण छ, जसलाई सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ । नागरिकले समेत सबै कुराको सिकायत गर्नुभन्दा कसरी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सकिन्छ भनेर लाग्नुपर्दछ र यस्ता संरचनाको दिगोपनका लागि नागरिक, व्यापारी, व्यवसायी सबैलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भनेर आचारसंहिता निर्माण गरेका छौं । आगामी दिनमा नागरिक सचेतना अभियान चलाउने पहल गरिरहेका छौं । यसरी सार्वजनिक संरचनाको दिगोपनका लागि विभिन्न पक्षसँंग मिलेर अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौं । उपभोक्ताले बनाएका संरचनासमेत कमशल बन्नु अत्यन्त दुःखद पक्ष हो । सार्वजनिक संरचनालाई आयआर्जनसँंग जोडेर यसको दिगोपनको सुनिश्चितता गर्नका लागि कार्यविधि बनाएर अगाडि बढिरहेका छौं । हाम्रो देशमा यस्ता कार्यमा जनताको सहभागिता जुटाउने विधि नभएको परिप्रेक्ष्यमा हामी यसका लागि पहल गर्दैछौं । यो नयाँ काम भएकाले केही समय लागे पनि हामी त्यो दिशामा अगाडि बढिरहेका छौं । हामी आफ्नो गन्तव्यका बारेमा प्रष्ट छौं त्यसैले केही समय लागे पनि हामी त्यो लक्ष्यमा अवश्य पुग्नेछौं ।
अन्त्यमा नगरवासीलाई के भन्न चाहानु हुन्छ ?
अहिले वर्षाका कारण बाढीपहिरो आइरहेको छ, चाडपर्वसमेत नजिकिएका छन् । तर योसँंगै कोभिडको प्रकोप पनि बढ्दो छ यो समयमा हामी सबै सचेत बन्न जरुरी छ । स्थानीय सरकार सधै तपाईंसँंगै रहेको छ र हामी जतिबेला पनि सहयोग गर्न तयार छौं । केही समस्या भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला । तपार्इं हामी मिलेर नै हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न सक्नेछौं त्यसैले यो कष्टकर अवस्थामा तपार्इंको साथ र सहयोग आवश्यक छ ।